Yamaha Enters Electric Motorcycle Market – Ultimate MotorCycling | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → Yamaha → Yamaha Enters Electric Motorcycle Market - အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
19 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စျေးကွက်ဝင်ရောက်လာ – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
Yamaha plans to introduce electric motorcycles in the markets of Taiwan and Europe in 2011. Demand for electric motorcycles in Japan, Taiwan and Europe is forecast to reach 300,000 သို့ 500,000 units in the mid-2010s.
Yamaha Jacob Zuma ကို 50 – ပိုင်ရှင်မော်တော် Scooter လမ်းညွှန် Reviews
Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Ducati Diavel Ducati Desmosedici GP11 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Bajaj Discover Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး Colleda CO Ducati 60 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Brammo Enertia စမတ် eScooter Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး AN 650 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down